IGlycogen nemisebenzi yayo emzimbeni womuntu > Isifo sikashukela
Yini i-glycogen futhi iyini indima yayo emzimbeni?
Amasheya we-glycogen ngesimo semifantu emincane agcinwa esibindini nasemisipha yemisipha. Futhi, le polysaccharide isemangqamuzaneni esistimu yezinzwa, izinso, i-aorta, i-epithelium, ubuchopho, kwizicubu ze-embryonic nase-mucine mucosa. Emzimbeni womuntu osekhulile onempilo, kuvame ukuba nama-400 g ento leyo. Kodwa, ngendlela, ngokuzikhandla ngokomzimba, umzimba usebenzisa ngokuyinhloko i-glycogen yemisipha. Ngakho-ke, abakhi bomzimba mayelana namahora ama-2 ngaphambi kokuqeqeshwa kufanele futhi bazanelise ngokudla okuphezulu kwe-carb ukuze kubuyiswe ukuhanjiswa kwendaba.
Amakhemikhali abiza i-polysaccharide ngefomula (C6H10O5) n glycogen. Elinye igama lalesi sakhi isitashi sezilwane. Futhi yize i-glycogen igcinwa kumaseli ezilwane, kepha leli gama alilungile ngokuphelele. Le nto yatholakala ngudokotela wezokwelapha ongumFulentshi uBernard. Cishe eminyakeni eyi-160 eyedlule, usosayensi waqala ukuthola ama-carbohydrate "asele" kumaseli wesibindi.
I-"cargohydrate" esele "igcinwa ku-cytoplasm of cell. Kodwa uma umzimba uzizwa uswela ngokungazelele ushukela, i-glycogen iyakhishwa bese ingena egazini. Kepha, ngokujabulisayo, yi-polysaccharide kuphela eqoqwe esibindini (i-hepatocide) ekwazi ukuguqula ibe ushukela, ongagcwala isinyama "esilambile". Ukulondolozwa kwe-Glycogen ngensimbi kungafinyelela kumaphesenti ama-5 ubunzima bayo, kanti emzimbeni omdala kungaba ngu-100-120 g. AmaHepatocides afinyelela ekugxileni kwawo okuphelele cishe ihora elilodwa nesigamu ngemuva kokudla okugcwele ama-carbohydrate (i-confectionery, ufulawa, ukudla okunesitashi).
Njengengxenye yemisipha, i-polysaccharide ethatha okungaphezu kwamaphesenti ayi-1-2 wesisindo sezicubu. Kepha, uma unikezwe indawo ephelele yemisipha, kuba sobala ukuthi i-glycogen "idiphozithi" emisipha idlula ezitolo zezinto esibindini. Futhi, inani elincane le-carbohydrate litholakala ezinso, kumaseli e-glial ebuchosheni nasemangqamuzaneni amhlophe egazi (amaseli amhlophe egazi). Ngakho-ke, izinsalela eziphelele ze-glycogen entweni yabantu abadala zingaba cishe yingxenye yekhilogremu.
Kuyathakazelisa ukuthi kutholakale “i-reservation” saccharide kumaseli ezitshalo ezithile, isikhunta (imvubelo) kanye namagciwane.
IGlycogen igxile kakhulu kumaseli wesibindi nemisipha. Futhi kufanele kuqondwe ukuthi le mithombo emibili yamandla wesipele inemisebenzi ehlukile. I-polysaccharide yesibindi inikezela nge-glucose emzimbeni wonke. Lokho wukuthi, inesibopho sokuqina kwamazinga kashukela wegazi. Ngomsebenzi ngokweqile noma phakathi kokudla, izinga le-glucose ye-plasma liyancipha. Futhi ukuze ugweme i-hypoglycemia, i-glycogen equkethwe kumaseli wesibindi iyaqhekeka bese ingena egazini, ikala inkomba ye-glucose. Umsebenzi wokulawula isibindi kulokhu kufanele ungabukelwa phansi, ngoba ukushintshwa kwezinga likashukela kunoma iyiphi indlela kugcwele nezinkinga ezinkulu, ngisho nokufa.
Ukulondolozwa kwemisipha kuyadingeka ukuze kugcinwe uhlelo lwe-musculoskeletal. Inhliziyo futhi ingumsipha onezitolo ze-glycogen. Ukwazi lokhu, kuba sobala ukuthi kungani iningi labantu linezinkinga zenhliziyo ngemuva kokuzila ukudla isikhathi eside noma ngokuba ne-anorexia.
Kepha uma ushukela omningi ungafakwa ngohlobo lwe-glycogen, khona-ke kuphakama umbuzo: "Kungani ukudla kwe-carbohydrate kufakwa emzimbeni ngamafutha?" Futhi kunencazelo yalokhu. Izitolo ze-Glycogen emzimbeni azilingani. Ngomsebenzi ophansi womzimba, izinqolobane zesitashi sezilwane azinaso isikhathi sokuchitha, ngakho-ke i-glucose iqongelela kolunye uhlobo - ngesimo se-lipids ngaphansi kwesikhumba.
Ngaphezu kwalokho, i-glycogen iyadingeka ukuze i-catabolism yama-carbohydrate ayinkimbinkimbi, ibandakanyeke ezinqubweni ze-metabolic emzimbeni.
I-Glycogen iyindawo yokugcina amandla ehlelekile eyenziwe emzimbeni kusuka kuma-carbohydrate.
Ekuqaleni, umzimba usebenzisa ama-carbohydrate atholakele ngezinhloso zamasu, futhi ubeka ukuphumula kosuku olunemvula. Ukuntuleka kwamandla yisizathu sokuwohloka kwe-glycogen kushukela.
Ukuhlanganiswa kwento kulawulwa ngamahomoni kanye nohlelo lwezinzwa. Le nqubo, ikakhulukazi emisipha, “ibangela” i-adrenaline. Futhi ukwehlukana kwesitashi sezilwane esibindini kusebenze i-glucagon ye-hormone (ekhiqizwa ama-pancreas ngesikhathi sokuzila). I-insulin ye-hormone inesibopho sokuhlanganisa i-"reserve" carbohydrate. Le nqubo iqukethe izigaba eziningana futhi ivela kuphela ngesikhathi sokudla.
I-Glycogenosis nezinye izifo
Kodwa kwezinye izimo, ukuwohloka kwe-glycogen akwenzeki. Ngenxa yalokhu, i-glycogen inqwabelana emangqamuzaneni azo zonke izitho nezicubu. Ngokuvamile, ukwephulwa okunjalo kubonwa kubantu abanokuphazamiseka kofuzo (ukungasebenzi kahle kwama-enzyme adingekayo ekuqhekekeni kwento). Lesi simo sibizwa ngegama elithi glycogenosis futhi sabelwa uhlu lwe-patosomal recessive pathologies. Kuze kube manje, izinhlobo eziyi-12 zalesi sifo ziyaziwa kwezokwelapha, kepha kuze kube manje yingxenye yazo kuphela efundwe ngokwanele.
Kepha lokhu akuyona ukuphela kwengqondo ehlobene nesitashi sezilwane. Izifo ze-glycogen zifaka ne-aglycogenosis, isifo esihambisana nokungabikho ngokuphelele kwe-enzyme ebhekene nokwakheka kwe-glycogen. Izimpawu zalesi sifo - kuthiwa yi-hypoglycemia kanye nokuquleka. Ukuba khona kwe-aglycogenosis kunqunywa yi-biopsy yesibindi.
Isidingo somzimba se-glycogen
IGlycogen, njengomthombo wesipele wamandla, kubalulekile ukuyibuyisela njalo. Ngakho-ke, okungenani, ososayensi bayasho. Ukwanda kokuzivocavoca komzimba kungaholela ekunciphisweni okuphelele kwezindawo zokugcina i-carbohydrate esibindini nasemisipha, okuzobe sekuthinta umsebenzi obalulekile kanye nokusebenza komuntu. Ngenxa yokudla okungapheli kwe-carbohydrate-free, izitolo ze-glycogen esibindini ziyancipha zacishe zibe yi-zero. Ukulondolozwa kwemisipha kuyaphela ngesikhathi sokuqeqeshwa ngamandla.
Umthamo omncane we-glycogen wansuku zonke uvela ku-100 g nangaphezulu. Kepha lesi sibalo kubalulekile ukwanda ngo:
ukuzikhandla okukhulu ngokomzimba,
umsebenzi wezengqondo othuthukisiwe,
ngemuva kokudla "okulambile".
Ngokuphambene nalokho, ukuqaphela ekudleni okune-glycogen kufanele kuphathwe nabantu abane-dysfunction yesibindi, ukuntuleka kwama-enzyme. Ngaphezu kwalokho, ukudla okuphezulu kwe-glucose kuhlinzekela ukuncipha kokudla kwe-glycogen.
Ukudla kwesitoreji se-glycogen
Ngokusho kwabaphenyi, ukuthola umthamo owanele we-glycogen cishe amaphesenti angama-65 wama-kilojoule umzimba okufanele uwathole emikhiqizweni enama-carbohydrate. Ikakhulu, ukubuyisa imali ebekiwe yesitashi sezilwane, kubalulekile ukwethula imikhiqizo yokubhaka, okusanhlamvu, okusanhlamvu, izithelo ezahlukahlukene nemifino ekudleni.
Imithombo engcono kakhulu ye-glycogen: ushukela, uju, ushokoledi, i-marmalade, ujamu, izinsuku, zomisiwe, amakhiwane, ubhanana, ikhabe, ama-Persimmons, ama-pastries amnandi, amajusi wezithelo.
Umphumela we-glycogen kwisisindo somzimba
Ososayensi banqume ukuthi cishe amagremu ama-400 we-glycogen anganqwabelana emzimbeni womuntu omdala. Kepha ososayensi babuye banquma ukuthi igremu ngalinye le-glucose eligcinayo libopha cishe amagremu amane amanzi. Ngakho-ke kuvela ukuthi i-400 g ye-polysaccharide icishe ibe ngu-2 kg wesisombululo samanzi se-glycogenic. Lokhu kuchaza ukujuluka ngokweqile ngesikhathi sokuqeqeshwa: umzimba udla i-glycogen futhi ngasikhathi sinye ulahlekelwe uketshezi oluphindwe kane.
Le ndawo ye-glycogen futhi ichaza umphumela osheshayo wokudla okuningilizayo kokunciphisa umzimba. Ukudla okungenawo ama-carbohydrate kuvusa ukusetshenziswa kwe-glycogen kakhulu, futhi ngayo - uketshezi oluvela emzimbeni. Ilitha elilodwa lamanzi, njengoba wazi, yi-1 kg yesisindo. Kepha lapho umuntu esebuyele ekudleni okujwayelekile okuqukethe ama-carbohydrate, izinsalela zesitashi sezilwane ziyabuyiselwa, kanye nazo uketshezi olulahlekile ngesikhathi sokudla. Lesi yisizathu sokuthi imiphumela yesikhashana yesikhashana yokuveza ukuncipha kwesisindo.
Ukwehla kwesisindo okusebenza ngempumelelo ngempela, odokotela abaluleki ukuthi bangabuyekezi kuphela ukudla (banikeze ukukhetha amaprotheni), kodwa futhi nokwandisa ukusebenza komzimba, okuholela ekusebenziseni ngokushesha i-glycogen. Ngendlela, abacwaningi bebala ukuthi imizuzu emi-2-8 yokuzivocavoca okukhulu kwe-Cardio yanele ukusebenzisa izitolo ze-glycogen futhi wehlise isisindo. Kepha le formula ilungele kuphela abantu abangenazo izinkinga zenhliziyo.
Ukushoda nokungaphezulu: kanjani ukunquma
Isidalwa esiqukethe izingxenye eziningi ze-glycogen kungenzeka sibike lokhu ngokusebenza kwegazi nokulimala kwesibindi. Kubantu abanokugcinwa ngokweqile kwale polysaccharide, ukungasebenzi kahle kwamathumbu kwenzeka, futhi nesisindo somzimba siyakhuphuka.
Kepha ukuntuleka kwe-glycogen ayidluleli emzimbeni ngaphandle komkhondo. Ukushoda kwesitashi sezilwane kungadala ukuphazamiseka ngokomzwelo nangokwengqondo. Kukhona ukunganaki, ukudangala. Kungenzeka futhi ukusola ukuncipha kwamandla okugcina amandla kubantu ababuthakathaka bokungazweli, inkumbulo embi, nangemuva kokulahlekelwa okukhulu kwezicubu zemisipha.
IGlycogen ingumthombo obalulekile wokugcina wamandla omzimba. Ububi bayo abukhona nje ukwehla kwezwi nokuwohloka kwamandla. Ukushoda kwento kuzothinta ikhwalithi yezinwele nesikhumba. Futhi ngisho nokulahleka kokukhanya emehlweni nakho kungumphumela wokuntuleka kwe-glycogen. Uma ubona izimpawu zokuntuleka kwe-polysaccharide, yisikhathi sokucabanga ngokuthuthukisa indlela odla ngayo.
I-Glycogen isebenza emzimbeni
IGlycogen yi-polysaccharide, ukwakheka kwayo okwenzeka ngesisekelo sezinsalela zeglucose ezenziwa ngumzimba. Kubaluleke kakhulu futhi kungenye yezindlela "zokuphepha" eziphambili zokugcina i-glucose ezicutshini, zigxile kakhulu esibindini nesibindi. Ngakho-ke, kuthiwa isibindi sithanda amaswidi - singesinye sezikhungo eziphambili zokugcinwa kwe-glycogen, okuyiyona ndlela eyinhloko yokugcinwa kweglucose enikezwe ngokudla. Ngenxa yezakhiwo zayo zamakhemikhali kanye nesakhiwo esinamagatsha anamanzi, kwesinye isikhathi i-glycogen ibizwa ngokuthi "isitashi sezilwane".
Umsebenzi oyinhloko we-glycogen emzimbeni womuntu ukwakheka kwesibekelelo samandla esingabandakanyeka ezimweni ezinjengokwehla okubukhali kweglucose yegazi noma ukwanda komzimba esikhathini esifushane. Kulokhu, yilokho kuphela i-glycogen, egxiliwe esibindini, esetshenziswa ngumzimba ukuhlanganisa amandla nokukhulisa umsebenzi wezinhlelo. Ngokwesilinganiso, isisindo sale nto esibindini singama-5% esisindo sayo. Ezicubu zemisipha, i-glycogen ikhiqizwa endaweni futhi kuphela ezimweni lapho umthwalo ukhuphuka kakhulu. Kwesinye isikhathi umthamo wokuhlushwa kwawo uphakeme kakhulu kunasesibindini, okungenzeka ukuthi kungenxa yesimo esiphuthumayo somuntu esimweni esiphuthumayo. I-glycogen encane kakhulu ikhona kumaseli wezicubu zezinso, ubuchopho kanye negazi.
Ukufeza umsebenzi wezondlamzimba, i-glycogen iphulwe phansi ibe ushukela ngesenzo sama-enzyme akhethekile futhi ngokushesha ingene egazini. Le nqubo ingaphansi komsebenzi wezinhlelo ze-neva ne-endocrine, ngakho-ke, ukwephulwa ekusebenzeni kwezitho zalezi zinhlelo kusheshe kuholele ekuphazamisweni kokuqalwa kanye nokuqhekeka kwe-glycogen, futhi ngenxa yalokho kuphazamise izinqubo zokudla komzimba, okungaholela, ngokwesibonelo, ekuthuthukisweni kwe-musical dystrophy.
Ngaphandle kwe-glycogen, ukuba khona komzimba womuntu akunakwenzeka, ngakho-ke, ukuncishiswa okubukhali kokusetshenziswa kwemikhiqizo equkethe ushukela kuholela ekuqhekekeni kwamasosha omzimba.
Okokuqala, kufanele kushiwo ngesidingo sansuku zonke se-glycogen, cishe amagremu ayi-100. Kodwa-ke, ungakhohlwa ukuthi leli nani liqukethe inani eliphelele lemikhiqizo edliwayo equkethe ushukela. Lokhu kufaka imikhiqizo ebhaka, amaswidi, izithelo ezomisiwe, imifino eminingi kanye neminye imikhiqizo. Ngakho-ke, le ndlela ejwayelekile akufanele ikutshele ukuthi ungakhokha kalula ushokoledi ongu-100 gramu nsuku zonke!
Ngaso leso sikhathi, isilinganiso esifunwayo sale nto singakhuphuka ngasizathu simbe, phakathi kwalokhu:
ukwanda okubukhali kokusebenza komzimba,
ukukhulisa ukusebenza kwengqondo, umsebenzi wobungcweti phakathi nosuku,
ngokuntuleka okujwayelekile kokudla.
Isimo esiphikisanayo sibonwa ngokweqile kwe-glucose ekudleni, okuvame kakhulu kubantu abasebenza ngezinyo elimnandi nabathandi bokudla okusemathinini. Kuyadingeka futhi ukunciphisa ukukhiqizwa kwe-glycogen lapho ukusebenza kwesibindi kukhubazekile noma ezinye izifo zihlotshaniswa nokuqhekeka kwe-glucose nokufakwa kwayo.
Ngaphandle kokuthi kunoshukela omningi ekudleni komuntu wesimanje, angabhekana neqiniso lokuthi i-glycogen izokwanela emzimbeni. Ukuntuleka kwe-Glycogen kungavezwa ezicini eziningi ezibalulekile.
1. Ukuthuthukiswa kokunganaki. Umzimba awunawo amandla anele ngisho nokugcina imood! Ngasikhathi sinye, kuba nomuzwa wokungabi nalutho, ukungabi nalutho, ubuvila, ukudangala, isifiso sokucasha kuwo wonke umuntu futhi konke kuyakhula, umuntu ufuna "ukuzisongela ngekhokhonathi" futhi azifihle kuzo zonke izinkinga.
2 Izinga lememori liyancipha. Uma ubujwayele ukukhumbula izingcingo zabo bonke abangane bakho nabantu obaziyo, manje awukwazi ukuphinda eyodwa. Ngasikhathi sinye, kuba nzima ngokwengeziwe kuwe ukubona imininingwane evela ngaphandle, ukhumbula okubi kakhulu imininingwane yosuku olwedlule, awuboni ngokuphelele imisebenzi oyibekelwe, empilweni nasemsebenzini. Kanye nememori, umbono uvama ukuhlupheka.
3. Ukunciphisa isisindo semisipha, ukuthuthukiswa kwe-dystrophy yezicubu zomsipha. Lokhu kungenxa yokuthi amangqamuzana awakutholi ukdla okwanele, imicu iba buthaka bese, ekuqaleni, iba mncane, bese ibhujiswa ngokuphelele, uma umsoco ungaqali ukungena emzimbeni. Ngakho-ke i-dystrophy iyakhula. Labo bantu abangazivumeli nhlobo amaswidi, ngisho nezithelo ezomisiwe nezithelo, abazilimazi ngokungaphansi kwalabo abasebenzisa amaswidi ngokungalawuleki!
4. Ukuncipha kwamasosha omzimba. Ngenxa yokulahlekelwa okujwayelekile kwethoni nokuntuleka kokudla okunamandla, amasosha omzimba nawo ayahlupheka, okuthinta ngokushesha imvamisa yezifo ngokumelene nesizinda sokuqhuma ngokweqile kwezikhathi ezithile. Into efanayo ingaholela ekuwohlokeni ekwakhekeni kwezifo ezithile ezingamahlalakhona umuntu anazo. Isibonelo, kwisifo sikashukela i-mellitus, lapho ukukhiqizwa kwe-insulin sekuvele konakele, ukuntuleka kwe-glycogen kungabulala nje.
5. Ukuthuthukiswa kokudangala. Imnandi i-provocateur eyinhloko yokukhiqizwa kwe-serotonin, ebhekele isimo esihle somoya. Lapho izinga le-glycogen lehla kakhulu, amangqamuzana obuchopho awakutholi ukondliwa okufanele, izinga le-serotonin lihamba kancane kepha ngokuqinisekile lihlehla, elikhipha imizwa, lishintshe umbono wezwe futhi likhuthaze ukuthuthukiswa kokudangala okujulile, okungalashwa kuphela ngosizo lwemithi efanelekile.
Ngokweqile kwe-glycogen, isithombe esihluke ngokuphelele siyabhekwa, esivame ukuba nzima kakhulu futhi sibe sibi kunalokho okungenhla.
1. Ukwanda kwegazi.
2. Ukwehluleka kwesibindi. Njengomthetho, ahambisana nokudakwa komzimba, njengoba ukuhlanzeka okuqhubekayo kokuma kwegazi, futhi yonke imikhiqizo yokucubungula amaprotheni, kanye nezinye izinto, iyaqhubeka nokuzulazula emzimbeni, iwubulala ubuthi.
3. Ukuthuthukiswa kwezifo zamathumbu amancane, ubungozi bokushayisana ne-oncology yepheshana lesisu.
4. Ukwanda kwesisindo, ingozi yokukhuluphala kakhulu, isifo sikashukela, unhlangothi.
Umthombo oqondile we-glycogen ukudla okuphezulu kushukela, i-fructose ne-sucrose, okungukuthi, konke okungabizwa ngokuthi okumnandi. Abamele abavelele kakhulu kulolu hlu yizinsuku namakhiwane. Ngokuphathelene nokuqukethwe ushukela, bahlala phezulu ohlwini lwezwe lonke lwazo zonke izitshalo zezithelo ezinhle!
Impela, imithombo emihle ye-glycogen yizithelo zemvelo (amawolintshi, i-kiwi, ama-sitrobheli, imango, amapetshisi, ama-Persimmons), nemifino ethile (i-beet, izaqathi).
Ushukela no -ju ohlanzekile, amaswidi efektri okusekwe kuwo (i-gingerbread, ama-muffin, ama-waffle, amaswidi ngokugcwaliswa, njll.) Awalusizo kangako ngokuya ngokuqukethwe kwama-carbohydrate akhanyayo. Inketho enhle yokwenza kabusha i-glycogen yi-ikhabe noma i-shrimp (Karinka). Kulabo abanengadi yabo, kufanelekile ukunaka i-apple jam eyenziwe ekhaya. Ngaphezu kwe-glycogen, futhi kungumthombo wama-pectins azuzisayo, asiza ekuhlanzeni umzimba ubuthi obunqwabelene.
I-Glycogen ingatholakala kuma-legumes amaningi, ngakho-ke kufanele upheke isobho lamakhala noma imifino enobhontshisi masonto onke. Imikhiqizo yokusanhlamvu ephelele, ukolweni ohlumewe, irayisi, i-oatmeal, ibhali, i-millet porridge enezithelo ezomile (ama-apricots omisiwe, ama-prunes, amagilebhisi omisiwe) nakho kungaba wusizo kule ndaba.
Emzimbeni womuntu, ukulethwa kwalesi zinto kwanele usuku, uma i-glucose ingaveli ngaphandle. Lesi isikhathi eside esifanele, ikakhulukazi uma ubheka ukuthi lezi zibekelelo zisetshenziswa ubuchopho ukwenza umsebenzi wengqondo.
I-Glycogen egcinwe esibindini ihlala ikhululwa futhi iphinde iphinde iqhume. Isigaba sokuqala senzeka ngesikhathi sokulala naphakathi kokudla, lapho izinga le-glucose egazini liyancishiswa futhi nokugcwaliswa kwalo kuyadingeka. Ukungena kwendaba emzimbeni kwenzeka ngaphandle, ngokudla okuthile.
I-Glycogen ne-glycogen izitolo emzimbeni
Ngaphambi kokuthi uqhubeke nokubheka udaba lokuthi "izitolo ze-glycogen emzimbeni", masihlale phezu kwencazelo yalesi sikhathi.
I-Glycogen Ingabe i-polysaccharide, okungukuthi, i-carbohydrate eyinkimbinkimbi eyakhiwe kusuka ezinsaleleni zeglucose. Ngokudla okuningana, amazinga kashukela egazi ayakhuphuka. Inani elidingekayo lisetshenziselwa ukuhlinzeka ngemisebenzi yamandla, kanti okudlulile kufakwa ngesimo se-glycogen. Kepha okuphambene nalokho, lapho izinga le-glucose egazini liwela, i-glycogen reservation ntho iwohloka ngaphansi kwethonya lama-enzyme. Ngenxa yalokhu, ukugcina amazinga eglucose ejwayelekile futhi enikeza umzimba ngomthombo wamandla oludingekayo.
Kepha, amathuba wesibindi akhawulelwe. Ngoba ngesikhathi singacubungula kufika ku-100 g kashukela. Ngenxa yalokho, ngokuhlinzekwa njalo kwe-glucose eyeqile, amaseli wesibindi azocubungula ushukela abe ngama-acid acid, isigaba sokugcina se-glycogeneis. Okuzoholela ekukhuphukeni kwamafutha omzimba.
Ngakho-ke, umthamo ofanele wama-carbohydrate ekudleni okukodwa unikeza ukwakheka kwe-glucose okweqile ku-glycogen, hhayi ukumiswa kungqimba lwamafutha.
Lapho i-glycogen iqongelela khona
Izitolo ze-Glycogen emzimbeni zigxiliwe ikakhulukazi ezicutshini nakwisibindi. Ngokwesilinganiso, cishe i-300-400 g ye-glycogen iyenziwa futhi igcinwe emzimbeni.
Ingxenye ebaluleke kakhulu ye-glycogen inqwabelana esibindini futhi, ngezinga elincane, izicubu zemisipha. Manje sikhuluma ngesilinganiso samaphesenti we-glycogen ku-organ mass. Isibonelo, okuqukethwe kwe-glycogen esibindini kufinyelela ku-5-6% wesisindo sesitho, kuyilapho emisipha kungadluli i-1%. Njengokulindelekile, uma sazi iqiniso lokuthi isisindo semisipha emzimbeni sikhulu kakhulu kunobunzima besibindi, isilinganiso esisegremu sizokuba ngale ndlela elandelayo: esibindini, ngokwesilinganiso, i-100-120 g ye-glycogen, nemisipha engu-200-280 g. U-Arthur C. Guyton, uJohn E. Hall, i-Medical Physiology, 11th ed. - New York, New York, USA: Isayensi, Oxford Press, Elsevier.
I-Glycogen esibindini isetshenziswe njengomthombo wamandla womzimba wonke. I-reservation ntho glycogen, lapho izinga likashukela wegazi lehlile, lephuka phansi libe ngamangqamuzana eglue bese lingena egazini. Njengomphumela, ukuphindaphinda izinga lamandla.
Imisipha glycogen iya ngqo ekuqinisekiseni umsebenzi wezicubu uqobo.
Ngakho-ke, ngokudla okune-carb ephansi, i-glycogen idliwa ngokuyinhloko. Okuholela kuqala ekulahlekelweni kwesisindo semisipha, bese kulapho kuphela kusetshenziselwa khona ukonga kwamafutha
Ukucabanga ngesihloko esithi "izitolo ze-glycogen emzimbeni" akunakuziba igama elithi "idepho ye-glycogen."
Okokuqala udinga ukuqonda ukuthi i-glycogen inqwabelana hhayi emisipheni kuphela, kodwa kulokho okubizwa ngokuthi yi-sarcoplasm. Ukwanda ngosayizi, i-musochochria yemisipha ihlinzeka indawo edingekayo yokugcwalisa ivolumu phakathi kwezicubu zomzimba, okunomthelela ekukhuleni kwevolumu ye-glycogen.
Impela ubonile ukuthi umuntu obamba iqhaza kwezemidlalo, ushesha ukukhathala ekuqaleni. Lokhu kungenxa yobukhulu obuncane be depo ye-glycogen. Inqubo yokwandisa usayizi wedepho ye-glycogen idinga isikhathi, ukondleka okufanele nokuqeqeshwa njalo. Ngakho-ke, ngokuqeqeshwa okuqinile futhi okuhlala isikhathi eside, izindawo ezigcinwe glycogen emzimbeni zanda kaningana. Ngokuzivocavoca okuphezulu ngokomzimba, izicubu zigcwele igazi. Okuthi, futhi, kube nomthelela ekwandeni kwedepho ye-glycogen ngenxa yokwanda ngosayizi wamaseli angayigcina.
Ngokusho kososayensi, idepho ye-glycogen kumele igcwaliswe kabusha futhi ikhuphuke njalo. Ngoba, ngenxa yokuntuleka kwemikhiqizo egcwele ushukela (lapho i-glycogen yakheka khona kamuva), ithoni yemisipha ilahlekile. Ngenxa yalokho, lokhu kufaka ukulahleka kwamandla, ukwehla kwenkumbulo nokuqapha, futhi ngokuhamba kwesikhathi kungaholela ezifweni zomzimba wokuzivikela.
Bukela ividiyo ngemiphumela ye-glycogen ekukhuleni kwemisipha. Isikhathi yimizuzu emi-4 kuphela.
Izitolo ze-glycogen zomzimba: imithombo efanele
Njengoba sithole ngaphambili, i-glycogen ihlanganiswe noshukela. Ngakho-ke, ukuthola ukugcwala okwanele kwe-glycogen emzimbeni, kuyadingeka ukuthola umthamo owanele wama-carbohydrate. Kodwa, ama-carbohydrate ahlukahlukene anezici ezingalingani zokuguqulwa zibe yi-glycogen noma i-fatty acids. Kuya ngenani le-glucose ekhishwe ngesikhathi sokuwohloka komkhiqizo. Ukucaciselwa, naka amatafula.
Leli thebula alisiqondisi lokugcina ukuhlela kabusha. Ukuvuma kanye nokwephuka kokuthile
imikhiqizo ibuye ihambisane nezici ze-metabolic zomuntu othize.
I-Glycogen iyingxenye ebalulekile yomsebenzi wezicubu zethu zemisipha, umthombo obalulekile wamandla.
Ukwandisa umthamo we-glycogen, ukuvivinya umzimba njalo kuyadingeka.
Imithombo eyinhloko ye-glycogen ukudla okune-carbohydrate ocebile.
Ukudla okufanele kuzosiza ukukhulisa inani lama-glycogen aqukethe emisipha.
I-Glycogen kwesinye isikhathi ibizwa nge-starch yezilwane, njengoba ukwakheka kwayo kuyefana ne-amylopectin, okuyingxenye yesitashi sesitshalo. Ihluka ngesitashi esakhiweni esinamagatsha amaningi nekhompiyutha, ayinikezi umbala oluhlaza okwesibhakabhaka lapho ihlanganiswa ne-iodine.
Njenge-carbohydrate yokugcina, i-glycogen nayo ikhona kumaseli wokukhunta.
Kutholakala kuwo wonke amaseli nezicubu zomzimba wesilwane ngezindlela ezimbili: i-glycogen ezinzile, ihlanganiswe ngokuqinile nenhlanganisela namaprotheni, futhi ifakwe ilembu lesimo semiganu, amaconsi avele obala ku-cytoplasm.
Ukuhlela kwesimo se-Metabolism |
Isibindi - isitho esikhulu sangaphakathi, esingafinyelela ku-1.5 kg. Yenza imisebenzi eminingi ebalulekile, kufaka phakathi i-carbohydrate metabolism. Ngalo, igazi liyahlungwa emgudwini wesisu, ogcwele izinto ezihlukahlukene.
Nge-glucose ejwayelekile yegazi, inkomba yayo ingaba sebangeni le-80-120 mg nge-desilita yegazi ngalinye. Kokubili ukushoda kanye nehaba le-glycogen egazini kungaholela ezifweni ezinkulu, ngakho-ke indima yesibindi ikhulu kakhulu.
Ukuqongelela nokugcinwa kwe-glycogen nakho kuyenzeka ezicutshini zemisipha. Kuyadingeka amandla ukuze ungene emzimbeni ngesikhathi sokuzivocavoca ngokomzimba. Ungabuyisela ngokushesha izinqolobane zayo uma, ngemuva kokuzivocavoca, udla ukudla noma iziphuzo ezinesilinganiso esingu-4: 1 sama-carbohydrate namaprotheni.
Ukubaluleka kwama-carbohydrate omzimba
Ama-carbohydrate adliwayo (aqala kusisitashi sazo zonke izinhlobo zezilimo futhi aphela nge-carbohydrate esheshayo yezithelo ezahlukahlukene namaswidi) aqhekeka phansi abe ushukela olula noshukela lapho kugayishwa. Ngemuva kwalokho, ama-carbohydrate aguqulwa ku-glucose athunyelwa umzimba aya egazini. Ngasikhathi sinye, amafutha namaprotheni awakwazi ukuguqulwa abe ushukela.
Le glucose isetshenziswa ngumzimba womabili ngezidingo zamanje zamandla (ngokwesibonelo, lapho ugijima noma okunye ukuqeqeshwa ngokomzimba), kanye nokwenza ukonga amandla okugcina. Kulokhu, umzimba uqala ubopha i-glucose kuma-molecule we-glycogen, kuthi lapho amadepho e-glycogen egcwele ukugcwala, umzimba uguqula ushukela ube ngamafutha. Kungakho abantu bethola amafutha kumakhamzimba amaningi.
Shintsha kuzidingo ze-glycogen
Isidingo sanda nge:
ukwanda kokuzivocavoca ngokomzimba kohlobo olufana.
ukwanda kokusebenza kwengqondo kukhipha inani elikhulu le-glycogen.
ukungondleki. Uma umzimba ungatholi i-glucose, khona-ke ukusetshenziswa kwezindawo ezigcinwe kuyo kuqala.
uma kwenzeka izifo ezidinga ukungena kakhulu kweglucose.
uma ukudla kuqukethe inani elikhulu lale ngxenye.
uma kwenzeka wehluleka emsebenzini we-enzyme.
Ekushoneni okungapheli kwale ngxenye kwenzeka ukugcotshwa kwamafutha esibindini, okungaholela ekukhohlisweni kwamafutha ayo. Manje imithombo yamandla akuwona ama-carbohydrate, kepha amaprotheni namafutha. Igazi liqala ukuqongelela ngokwalo imikhiqizo eyingozi - ama-ketones, okuthi ngamanani amakhulu alahle ubuwula bomzimba futhi kungaholele ekulahlekelweni kokungazi.
Ukuntuleka kwe-Glycogen kuboniswa yizimpawu ezilandelayo:
Ubuthakathaka obujwayelekile nokubinza,
Umuzwa wendlala engapheli.
Izimpawu ezinjalo zingashabalala ngokushesha lapho umzimba uthola inani elidingekayo lama-carbohydrate noshukela.
Okweqile kubonakaliswa ukwanda kwe-insulin egazini nokuya phambili ukukhuluphala komzimba. Lokhu kwenzeka lapho inani lama-carbohydrate amaningi lingena emzimbeni ekudleni okukodwa. Ukwenza umzimba uguqukele kumaseli amanoni.
Ukuze ugweme imiphumela emibi, kwanele ukulungisa indlela odla ngayo, ukunciphisa ukusetshenziswa kwamaswidi futhi unikeze umzimba umzimba ngokomzimba.
Umsebenzi womsipha we-glycogen
Ngokombono wokubuka kwe-biology, i-glycogen ayiqoqeki emithanjeni yemisipha ngokwayo, kodwa ku-sarcoplasm - uketshezi oluzungezile lwezakhi zomzimba. I-FitSeven isivele ibhale ukuthi ukukhula kwemisipha kuhlotshaniswa kakhulu nokwenyuka kwevolumu yalesi sakhi esithile sezakhi zomzimba - izicubu ziyefana ngesakhiwo nesipanji esidonsa i-sarcoplasm futhi sikhuphuke ngosayizi.
Ukuqeqeshwa njalo kwamandla kuthinta kahle usayizi wamadepho we-glycogen kanye nenani le-sarcoplasm, okwenza izicubu zibukeke zikhulu futhi zibukeka ngokwengeziwe. Kodwa-ke, kubalulekile ukuqonda ukuthi isibalo semicu yemisipha sinqunywa ngokuyinhloko luhlobo lofuzo lomzimba futhi empeleni alushintshi phakathi kwempilo yomuntu, noma ngabe uqeqeshwa.
Umphumela we-glycogen emisipha: i-biochemistry
Ukuqeqeshwa okuphumelelayo kokwakhiwa kwemisipha kudinga izimo ezimbili: okokuqala, ukuba khona kwezindawo ezanele ze-glycogen emisipha ngaphambi kokuqeqeshwa, futhi okwesibili, ukubuyiselwa okuphumelelayo kwamadepho we-glycogen ekugcineni kwawo. Ukwenza izivivinyo zamandla ngaphandle kwezitolo ze-glycogen ngethemba lokuthi "kuzophela", okokuqala uphoqa umzimba ukuthi ushise izicubu zomzimba.
Kungakho ekukhuleni kwemisipha kubalulekile ukuthi ungasebenzisi kakhulu amaprotheni e-Whey nama-amino acid we-BCAA ukuze ube nenani elikhulu lama-carbohydrate ekudleni - futhi, ikakhulukazi, ukudla okwanele kwama-carbohydrate asheshayo ngemuva kokuqeqeshwa. Eqinisweni, umane nje awukwazi ukwakha izicubu zomzimba ngenkathi udla ukudla okungenawo ama-carbohydrate.
Ungakhulisa kanjani izitolo ze-glycogen?
Izitolo zemisipha yeglycogen zenziwa kabusha ngama-carbohydrate avela ekudleni noma kusetshenziswa isitholi semidlalo (ingxube yamaprotheni nama-carbohydrate). Njengoba sishilo ngenhla, lapho sekugaywa ukudla, ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi aqhekeka phansi alula, aqale ngokungena egazini ngesimo se-glucose, bese elungiswa ngumzimba kuye ku-glycogen.
I-index ephansi ye-glycemic ye-carbohydrate ethile, ihamba kancane inika amandla ayo egazini futhi inani eliphakeme lokuguqulwa kwayo li-deply ye-glycogen, hhayi ama-subcutaneous fat. Lo mthetho ubaluleke kakhulu kusihlwa - ngeshwa, ama-carbohydrate alula adliwe ekudleni kusihlwa azohamba ngokuyikhulu emafutheni esiswini.
Umphumela we-glycogen ekushisweni kwamafutha
Uma ufuna ukushisa amanoni ngokuziqeqesha, khumbula ukuthi umzimba uqala ukusebenzisa izinqolobane ze-glycogen, bese kuphela lapho uya ezitolo ezinamafutha. Kungalesi sizathu ukuthi isincomo sisuselwa ekuthini uqeqesho olusebenzayo lokushisa amafutha kufanele lwenziwe okungenani imizuzu engama-40 kuya kwengama-5 ngeshayela ngokulinganiselayo - okokuqala umzimba usebenzisa i-glycogen, bese uya emafutheni.
Ukuzijwayeza kukhombisa ukuthi amafutha asha ngokushesha kakhulu ngesikhathi sokuzivocavoca kwe-Cardio ekuseni esiswini esingenalutho noma ngesikhathi sokuqeqeshwa amahora ama-3-4 ngemuva kokudla kokugcina - ngoba kuleli cala izinga likashukela wegazi selivele lisezingeni elincane, izitolo zemisipha ye-glycogen zichithwa kusuka emizuzwini yokuqala yokuqeqeshwa (bese kuthi amanoni), hhayi amandla eglucose egazini.
IGlycogen iyindlela eyinhloko yokugcina amandla eglucose kumaseli ezilwane (akukho glycogen ezitshalweni). Emzimbeni womuntu omdala, cishe i-200-300 g ye-glycogen iyanqwabelana, igcinwe ikakhulukazi esibindini nasemisipha. I-Glycogen isetshenziswa ngesikhathi sokuqina nokusebenza kwe-Cardio, futhi ekukhuleni kwemisipha kubaluleke kakhulu ukuyiphindisela kahle lapho ibekiwe.
I-“Malt ushukela” - yilokhu i-maltose yemvelo esetshenziselwa ukubizwa maltose ibizwa njalo.
Ushukela we-Malt uwumkhiqizo we-Fermentation yemvelo yemalt equkethwe okusanhlamvu okuhlumewe, okomile naphansi (sikhuluma ngo-rye, ilayisi, oats, ukolweni nommbila).
Ushukela onjalo unokunambitheka okunoshukela omncane futhi okumnandi (ngokungafani nomhlanga ne-beet), ngenxa yalokho esetshenziswa embonini yokudla ekwenziweni kwalokhu:
izidlo zokudla (isb. amakhukhi nama-roll rolls,
Ngaphezu kwalokho, yi-maltose esetshenziswa ekwenziweni kwama-molasses, okuyingxenye ebalulekile yobhiya.
I-Maltose ayisiwona kuphela umthombo wamandla omuhle, kepha futhi yinto esiza umzimba ukuthi uthole amavithamini e-B, i-fiber, ama-amino acid, ama-macro- kanye nama-micronutrients.
Le-disaccharide ingaba yingozi uma ichithwa ngokweqile.
Yikuphi ukudla okuqukethe umanyolo?
Ngobuningi, imaltose itholakala okusanhlamvu okuhlumile.
Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe okuncane kwalesi carbohydrate kutholakala kumatamatisi, amawolintshi, imvubelo, uju, isikhunta, kanye nampova, imbewu kanye nencenye yezitshalo ezithile.
Isitashi singokwesigaba sama-carbohydrate ayinkimbinkimbi anenani eliphakeme lamandla, kanye nokugaya ukudla okulula. Le polysaccharide, edlula emgodini wesisu, iguqulwa ibe ushukela, omunca amahora angama-4. Kuyinto isitashi ebiza cishe amaphesenti ama-80 ama-carbohydrate adliwe ngokudla.
Kepha! Ukutholwa okwedlulele kwale carbohydrate, akunconywa ukuyisebenzisa ngasikhathi sinye ngemikhiqizo yamaprotheni, ekumbeni lapho kudingeka khona i-alkaline acid (kuyadingeka nasekuthambekeni kwesitashi, okuvusa amandla okuswelayo kumaseli wamafutha). Ukuze ukwamukelwa kwemifino enesitashi kwenzeke ngemodi efanelekile, futhi umzimba uthole inani elifanele lamavithamini namaminerali, ukusetshenziswa kwesitashi kufanele kuhlanganiswe nokudla kwamafutha okuqukethwe ku-oyela yemifino, ukhilimu kanye no-ukhilimu omuncu.
kwehlisa i-cholesterol ku-serum yegazi, kanye nesibindi, esivimbela ukukhula kwesifo se-sclerosis,
Ukususwa kwamanzi ngokweqile emzimbeni,
ukususwa kwezinqubo zokuvuvukala, okubaluleke kakhulu kubantu abanezilonda,
ukugaya into ejwayelekile
ukubambezela ukumunca ushukela, okusiza ukwehlisa izinga layo ngemuva kokudla,
ukuncishiswa kokucasuka kwesikhumba.
Ama-Starches angokwemvelo (atholakala emikhiqizweni yemvelo) futhi akhanyisiwe (atholakala ekukhiqizweni kwezimboni). Isitashi esikhanyisiwe, esandisa i-inulin ngesikhathi sokugaya futhi sinomthelela ekuthuthukiseni i-atherosulinosis, i-eyeball pathology, ukungalingani kwe-metabolic nokulinganisela kwe-hormonal, kuyingozi.
Ngakho-ke, noma nini lapho kungenzeka, imikhiqizo equkethe isitashi esiyimpuphu kufanele ingafakwa ekudleni (enye yale mikhiqizo yisinkwa esenziwe ngofulawa weprimiyamu).
Kubalulekile! Amanani amaningi wesitashi wemvelo angadala ukugcwala, ukuqhakaza nesisu.
Yini ukudla okuqukethe isitashi?
Isitashi sitholakala ngobuningi emaphepheni nasezwaneni, okusanhlamvu, pasta, imango, ubhanana, izitshalo ezinezimpande, kanye nezilimo eziyizigaxa.
Isitashi sikhona emikhiqizweni elandelayo:
rye, ilayisi, ummbila nefulawa kakolweni,
i-oat ne-corn flakes,
u-soy kanye nokwephulwa kwawo,
i-parsley ne-celery izimpande
Kubalulekile! Ukuze ulondoloze izindawo ezinomsoco futhi ezizuzisayo zesitashi, kunconywa ukupheka ukudla okunesitashi kombhangqwana noma ukusebenzise okusha.
Kubalulekile! Imikhiqizo elapha ukushisa equkethe isitashi kunzima ukuyigaya kunokudla okuluhlaza.
Iqiniso elithandekayo! Ukuhlola ukuthi ngabe imifino noma isithelo siqukethe isitashi, ungenza isivivinyo esilula, okubandakanya ukuthi ithonsi le-iodine ligxonswa engxenyeni yemifino noma yezithelo. Uma ngemuva kwemizuzu embalwa ukwehla kuguquka kube luhlaza okwesibhakabhaka, khona-ke umkhiqizo ongaphansi kokuhlolwa uqukethe isitashi.
I-fiber, eyingxenye yesigaba sama-polysaccharides, iyifayibha eyisisekelo sezitshalo (lokhu kufaka izithelo nemifino, amajikijolo nezilimo zezimpande).
Kubalulekile! I-fiber cishe ayingenwa emathunjini, kodwa ngasikhathi sinye ifaka ingxenye esebenzayo ekuvumelaneni kwendlela yokugaya ukudla.
ukuthuthukiswa kokusebenza kwamathumbu wamathumbu,
neqhaza ekuqothulweni kwe-cholesterol,
ukuvikelwa okuthuthukisiwe kwe-bile,
ukumuncwa kanye nokususwa kobuthi nobuthi,
ukukhuthaza ukugaya ama-carbohydrate,
ukuvimbela izifo zenhliziyo nomdlavuza wekholoni,
ukuvimbela ukwakheka kwamatshe ayizimbi,
ukugcina microflora ejwayelekile yamathumbu,
neqhaza ekunciphiseni kwamafutha omzimba.
Kubalulekile! Ifayibha ivimbela ukufakwa ngokushesha kwe-glucose monosaccharide emathunjini amancane, ngaleyo ndlela ivikele umzimba ekwehlekeni okubukhali koshukela wegazi.
Yini ukudla okuqukethe i-fiber?
Ukudla okwenziwa nsuku zonke kwe-fiber emsulwa (okungukuthi, ngaphandle kokucabanga ngobuningi bomkhiqizo lapho kutholakala khona i-carbohydrate) okungenani 25 g.
Ifibre itholakala ngobuningi emaphephweni angaphandle okusanhlamvu, imbewu nobhontshisi, kanye nasesithombeni semifino nezithelo (ikakhulukazi izithelo zamawolintshi).
Ngaphezu kwalokho, le polysaccharide itholakala kwimikhiqizo elandelayo:
imikhiqizo ebhaka ufulawa,
izinhlobo ezahlukene iklabishi
Kubalulekile! Amafutha, ushukela, imikhiqizo yobisi, ushizi, inyama nenhlanzi akunayo i-fiber.
I-Cellulose iyinto yokwakha esetshenziswayo emhlabeni wezitshalo: ngokwesibonelo, ingxenye engenhla yezitshalo iqukethe i-cellulose, okubandakanya izinto ezifana nekhabhoni, umoya-mpilo ne-hydrogen.
I-cellulose luhlobo lwe-fiber.
Kubalulekile! I-Cellulose ayigaywa ngumzimba womuntu, kepha ilusizo olukhulu kuyo njenge- “roughage”.
I-cellulose idonsa amanzi ngokuphelele, ngaleyo ndlela yenze umsebenzi wekholoni, osiza ukubhekana ngempumelelo nalokhu kuphazamiseka kwezifo nezifo:
i-diverticulosis (ukwakheka kokuqina kodonga lwamathumbu wesimo sethambo)
Yini ukudla okuqukethe i-cellulose?
Kusuka olimini lwesiGrikhi, igama lale-carbohydrate, okuluhlobo lwefayibha, lihunyushwa ngokuthi "curled" noma "eqandisiwe". I-Pectin ingumenzeli ohlanganisa imvelo kuphela.
Ukungena emzimbeni, i-pectin inomsebenzi ombaxambili: okokuqala, isusa i-cholesterol emibi, ubuthi kanye nama-carcinogen, futhi okwesibili, ihlinzeka nge-glucose kumashu, okunciphisa ingozi yokuthola izifo zenhliziyo, isifo sikashukela nomdlavuza.
ukuthuthukiswa kokujikeleza kokujikeleza,
ukulungiswa kwemvelo kwamathumbu
ukuqedwa kokubonakaliswa kokudakwa okungapheli,
ukucebisa umzimba ngama-organic acid, amavithamini kanye namaminerali,
ukubambezela ukumunca ushukela ngemuva kokudla ukudla, okuwusizo olukhulu kubantu abanesifo sikashukela.
Ngaphezu kwalokho, le-carbohydrate inempahla yokumboza, ukubhula ngezinkanyezi, ukumelana nokuvuvukala kanye ne-analgesic, ngenxa yalokho kuboniswa kubantu abaphazamisekile emgodini wokugaya ukudla nezilonda ezi-peptic.
Ngokusetshenziswa ngokweqile kwe-pectin, ukuvela kokuvela okunjalo kungenzeka:
ukumuncwa okuphansi kwamaminerali awusizo njengensimbi, i-calcium, i-magnesium ne-zinc,
ukuvutshelwa koloni, kuhambisana nokugcwala kanye nokwehla kwe-digestibility yamaprotheni namafutha.
Kubalulekile! Ngemikhiqizo yemvelo, i-pectin ingena emzimbeni ngemithamo emincane, ingakwazi ukuholela ekwandisweni, ngenkathi le polysaccharide ingaba yingozi empilweni uma izithasiselo zokudla zisetshenziswa ngokungafanele.
Yini ukudla okuqukethe i-pectin?
Ukudla okwenziwa nsuku zonke kwe-pectin emsulwa kucishe kube ngu-20-30 g. Uma ukudla kudliswa ngezithelo, imifino namakhambi, khona-ke asikho isidingo sokuthola i-pectin kusuka kwezengezo zokwenziwa.
Uhlu lwemikhiqizo equkethe i-pectin:
ukholifulawa kanye neklabishi emhlophe,
I-inulin ingeyesigaba sama-polysaccharides wemvelo wemvelo. Isenzo saso sifana nesenzo se-prebiotic, okuwukuthi, into ethi, cishe engaqhakazisi emathunjini, isebenze i-metabolism nokukhula kwe-microflora enenzuzo.
Kubalulekile! I-insulin iqukethe amaphesenti angama-95 epructose, omunye wemisebenzi yawo ukubopha ushukela bese uwususa emzimbeni, okwehlisa ukunqwabelana koshukela egazini.
ukwenziwa ngokwejwayelekile kwendlela yokugaya ukudla,
ukwenza ngcono ukutholwa kwamavithamini kanye namaminerali,
ukuncishiswa kwengozi yomdlavuza,
ukuthungwa kwe-insulin okungcono
ukuvimbela ukwakheka kwezihibe zegazi,
ukulungiswa komfutho wegazi
ukukhuthaza ukuqedwa kwe-bile.
Kubalulekile! I-inulin idonswa kalula ngumzimba womuntu, ngenxa yalokho isetshenziswa kushukela ekwelashweni njengento yokufaka isitashi noshukela.
Yini ukudla okuqukethe i-inulin?
I-Jerusalema artichoke yaziwa kufanele njengomholi kokuqukethwe kwe-inulin, nezilimo eziyizigaxa ezidliwayo okuthi ekunambithekeni kwazo zifane nokunambitheka kwamazambane ajwayelekile kuwo wonke umuntu. Ngakho-ke, i-Jerusalema artichoke tuber iqukethe amaphesenti angaba ngu-15 - 20 e-inulin.
Ngaphezu kwalokho, i-inulin itholakala kwimikhiqizo enjalo:
Iqiniso elithandekayo! Namuhla, i-inulin isetshenziswa ngenkuthalo ekwenziweni kwemikhiqizo eminingi yokudla, kanye neziphuzo: u-ayisikhilimu, ushizi, imikhiqizo yenyama, okusanhlamvu, amasoso, amajusi, ukudla kwezingane, okubhakiwe, i-pasta ne-confectionery.
I-Chitin (ehunyushwe isuselwa esiGrekini ngokuthi "chitin" isho "okokugqoka") yinto eyingxenye yesigaxa sangaphandle sobabili se-arthropods nezinambuzane.
Iqiniso elithandekayo! I-Chitin ingenye yama-polysaccharides ajwayelekile emvelweni: ngokwesibonelo, cishe ama-gigatons ayi-10 alesi zinto aqalwa futhi abulwe kwiplanethi ephilayo yoMhlaba minyaka yonke.
Kubalulekile! Kuzo zonke izidalwa ezikhiqiza futhi zisebenzise i-chitin, ayikho ngendlela yayo emsulwa, kepha ihlangene namanye ama-polysaccharides.
ukucindezelwa kokukhula kweseli yomdlavuza ngokungathathi hlangothi imiphumela ye-carcinogens ne-radionuclides,
ukuvikela ukuhlaselwa yinhliziyo nemivimbo ngokwandisa umphumela wezidakamizwa ezikhuthaza ukuncipha kwegazi,
kwehlisa i-cholesterol yegazi, evimbela ukuthuthukiswa kwe-atherosulinosis kanye nokukhuluphala,
ukuvuselela ukukhula kwe-bifidobacteria ezuzisayo, enomthelela ekujuleni kwendlela yokugaya,
ukuqedwa kwezinqubo zokuvuvukala,
ukusheshiswa kwezinqubo zokuvuselela izicubu,
kwehlisa umfutho wegazi
ukwehla kushukela wegazi.
Yini ukudla okuqukethe i-chitin?
I-chitin emsulwa itholakala emthanjeni wangaphandle wamkhaza, ama-shrimps kanye nama-lobster.
Ngaphezu kwalokho, le nto ikhona ezinhlotsheni ezithile ze-algae, kumakhowe (amakhowe wezinyosi namakhowe e-oyster athandwa kakhulu phakathi kwabantu bakithi), kanye nemvubelo. Ngendlela, izimpiko zezimvemvane nama-ladybugs nazo ziqukethe i-chitin.
Kepha lokhu akupheleli: ukwenza isibonelo, emazweni ase-Asia, ukuntuleka kwe-chitin kwenziwa ngokudla isikhonyane, amakhethini, amabhungane nezibungu zawo, izibungu, izintethe, amacimbi kanye namaphela.
I-Glycogen (le-carbohydrate ibizwa nangokuthi "isitashi sesilwane") iyindlela eyinhloko yokugcina ushukela, futhi lolu hlobo “lwamandla alondoloziwe” esikhathini esifushane lungakha ukushoda kwe-glucose.
Ukhuluma ngani? Ama-carbohydrate angena emzimbeni ngokudla, lapho edlula emgodini wokugaya ukudla, aqhekeka phansi abe yi-glucose ne-fructose, enikeza amasistimu abantu nezitho ngamandla. Kepha ingxenye yalawa ama-monosaccharides angena esibindini, efakwa kuwo ngesimo se-glycogen.
Kubalulekile! I-glycogen “igcinwe” esibindini enendima ebalulekile ekugcineni ukunakekelwa kwe-glucose egazini ngezinga elifanayo.
Kubalulekile! I-Glycogen, egxiliswe esibindini, icishe iphele ngokuphelele amahora angama-10 kuye kwayi-17 ngemuva kokudla, kanti okuqukethwe yimisipha glycogen kuncipha kakhulu kuphela ngemuva kokuzivocavoca umzimba isikhathi eside nokuqina.
Ukwehla kokuxineka kwe-glycogen kubonakaliswa ukubonakala kokukhathala. Ngenxa yalokhu, umzimba uqala ukuthola amandla kumanoni noma emisipha, okungafuneki nakancane kulabo abakha ngamasipha imisipha ngamabomu.
I-glycogen ye-Spent kumele yenziwe kabusha kungakapheli amahora amabili, okuzosiza ekugwemeni ukungalingani phakathi kwamafutha, ama-carbohydrate, namaprotheni.
IGlycogen - kuyini?
Imithombo yamandla yokugcina ukusebenza komzimba womuntu, ngokuyinhloko, ngamaprotheni, amafutha nama-carbohydrate. Kuthatha isikhathi esithile ukuphihliza ama-macronutrients amabili okuqala, ngakho-ke babizwa ngokuthi ifomu lamandla “ahamba kancane,” futhi ama-carbohydrate aphulwe cishe ngokushesha "ashesha".
Ijubane lokufakwa kwe-carbohydrate kungenxa yokuthi isetshenziswa ngendlela yeglucose. Igcinwa kwizicubu zomzimba womuntu ngendlela eboshiwe kunendlela emsulwa. Lokhu kugwema ukweqisa okungavusa ukukhula kwesifo sikashukela. IGlycogen iyindlela enkulu agcinwa ngayo ushukela.
Ngabe i-glycogen ibuthana kuphi?
Inani eliphelele le-glycogen emzimbeni lingama-200-300 amagremu. Cishe amagremu we-100-120 ento aqongelela esibindini, okuseleyo kugcinwa emisipheni futhi kwenza isilinganiso esingu-1% sesisindo sonke salezi izicubu.
I-Glycogen evela esibindini ihlanganisa izidingo zomzimba wonke ze-glucose. Ukulondolozwa kwemisipha yayo kuya ekusetshenzisweni kwasendaweni, kuyachithwa lapho kwenziwa uqeqesho lwamandla.
Malini ama-glycogen asemisipha?
I-Glycogen inqwabelana emgudwini wezakhi zomsipha owuzungezile (isarcoplasm). Ukwakhiwa kwemisipha kubangelwa ubukhulu bethoni. Lapho liphakeme kakhulu, uketshezi oluningi lubanjwa yimicu yemisipha.
Ukwanda kwe-sarcoplasm kwenzeka ngokuqina komzimba. Ngokwesidingo esandayo se-glucose, esiya ekukhuleni kwemisipha, umthamo wokugcina ama-glycogen nawo uyanda. Usayizi waso uhlala ungashintshiwe uma umuntu engaqeqeshi.
Ukuxhomekeka Kokushisa Komzimba ku-Glycogen
Ngehora lokuvivinya umzimba kwe-aerobic ne-anaerobic, umzimba udinga cishe amagremu ayi-100-150 we-glycogen. Lapho izinsalela ezikhona zalo msebenzi ziqediwe, ukulandelana kungena ekuthatheni, okubandakanya ukubhujiswa kwemicu yemisipha, bese kuncipha izicubu.
Ukususa amafutha amaningi, kusebenza kakhulu ukuqeqesha ngemuva kwekhefu elide kusukela isidlo sokugcina, lapho izitolo ze-glycogen zidilizwa, ngokwesibonelo, esiswini esingenalutho ekuseni. Udinga ukuqeqesha ukwehlisa isisindo ngejubane elijwayelekile.
Ngabe i-glycogen ithinta kanjani ukwakhiwa kwemisipha?
Impumelelo yokuqeqeshwa kwamandla kokukhula kwemisipha ngqo incike ebukhoneni besilinganiso esanele se-glycogen yokuqeqeshwa kokubili nokubuyisela izinqolobane zayo ngemuva. Uma lesi simo singatholakali, ngesikhathi sokuqeqesha izicubu azikhuli, kodwa ziyashiswa.
Ukudla up ngaphambi kokuya ejimini nakho akunconywa. Izikhathi eziphakathi kokudla nokuqeqeshwa kwamandla kumele zikhule kancane. Lokhu kuvumela umzimba ukuthi ufunde ukuthi ungaphatha kanjani ngempumelelo ukubhuka okutholakalayo. Ukuzila isikhashana kususelwa kulokhu.
Ungayiphindisela kanjani i-glycogen?
I-glucose eguquliwe, eqoqwe yisibindi nezicubu zomzimba, yakhiwa ngenxa yokuqhekeka kwe-carbohydrate eyinkimbinkimbi. Okokuqala, bahlehla bafake izakhi zomzimba ezilula, bese beba ushukela ongena egazini, oguqulwa ube yi-glycogen.
Ama-carbohydrate anenkomba ye-glycemic ephansi anika amandla kancane, okunyusa amaphesenti ekwakhekeni kwe-glycogen, esikhundleni samafutha. Akufanele ugxile kuphela enkombeni ye-glycemic, ukhohlwe ngokubaluleka kwesamba sama-carbohydrate asetshenzisiwe.
Ukubuyiswa kabusha kukaGlycogen Ngemuva Kokuzivocavoca
“Iwindi le-carbohydrate” elivula ngemuva kokuqeqeshwa kubhekwa njengesikhathi esihle sokuthatha i-carbohydrate ukuze kubuyiswe i-glycogen bese kuqala inqubo yokukhula kwemisipha. Kule nqubo, ama-carbohydrate adlala indima ebaluleke kakhulu kunamaprotheni. Njengoba izifundo zakamuva zikhombisile, ukondliwa ngemuva kokuqeqeshwa kubaluleke kakhulu kunangaphambili.